Kodi 19.4 inosvika isina chero gadziriso yemaaddon asingashande | Linux Addicts
Kodi 19.4 inouya nezvimwe zvinhu zvitsva, asi hapana gadziriso yeaddon isiri kushanda, chimwe chinhu chevagadziri veaddon kugadzirisa.
Munguva pfupi yapfuura, vagadziri veLinux-yakavakirwa sisitimu yekushandisa vakaita kusvetuka kubva kuPython 3.9 kuenda kuPython 3.10, vachiyambira kuti kwaive kusvetuka kukuru uye kuti zvimwe zvinhu zvakaipa zvinogona kuitika. Kana mukana iwoyo uripo kubva kuv3.9 kusvika kuv3.10, ese ari maviri chikamu chev3.x, fungidzira zvinogona kuitika kurodha kubva kupython 2.x kuenda kupython 3.x. Kugadziridza hakuna kushata, kunoitwa zvakanaka, asi kana vagadziri vasingabatike, shanduko inogona kushamisa, chinhu chatiri kucherechedza kunyanya munzvimbo yemultimedia iyo maawa mashoma apfuura. akakanda Kodi 19.4.
Ini ndinoshandisa Linux uye handina kukwanisa kuiyedza paWindows (ndichaona kana ndikazviita paVM gare gare), asi akawanda maKodi addons anozivikanwa kuti ari kutadza. Chinhu chinosetsa ndechekuti vakashanda kusvika v19.2, uye zvese zvakatanga "kuparara" muv19.3. Naizvozvo, vamwe vedu taitarisira kuti zvese zvichadzokera kune zvakajairika neKodi 19.4 iyo chirongwa chakakorokotedza gore idzva, sezvo iri kuburitswa kwekutanga kwa2022.
1 Chii Chitsva muKodi 19.4
2 Maaddon ayo achiri kusashanda
Chii Chitsva muKodi 19.4
Estuary yakagadzirisa menyu yemukati pachiratidziro chikuru kana paine zvinhu zvinopfuura gumi mumenyu uye bhaa yekutsvaga haizonyangarika mushure me10s paunenge uchishandisa imwe application kudzora Kodi kure.
Mukuisa (Input), mamwe matambudziko neChinese neChirungu kiyibhodhi akagadziriswa.
Mimhanzi: Yakagadzirisa kutumira kune NFO yedhisiki yemuimbi.
MuPVB mune nzira itsva yekuronga yezvakarekodhwa zvichienderana nemwaka nezvikamu; yakagadzirisa kuparara paunenge uchifamba negwara risina chinhu; uye akagadzirisa kuti kudzima kana kuvanza boka rechiteshi kwakanga kusiri kushanda nemazvo.
Mumushandisi wemushandisi vakagadzirisa chero favourite kune yakaganhurwa kana yakavharika midhiya sosi, iyo ikozvino yakavanzwa; vakagadzirisa chimiro chezita uye vakatariswa paBlu-Ray ISO, iyo zvino inoratidza nenzira kwayo; uye yakagadziriswa apo mutauro usiriwo wakaonekwa nezita rezasi.
Vhidhiyo: EDL muting inoshanda, uye ASS subtitle kuona inoshanda zvakanaka.
Android: Yakagadziridzwa audio buffering uye yakagadzirisa akasiyana nyaya neTrueHD stutter/dropout.
Linux: Yakagadziriswa autoplay yeDVDs.
Fullscreen cursor chinzvimbo chakaiswa pa macOS.
Windows: Yakagadzirika inopenya paunenge uchipindirana H.264 SD pa AMD GPUs, uye kuparara kusingatarisirwi nekuda kwezvirongwa zvetiweki.
Xbox: Odhiyo nyowani inopfuura neWASAPI uye yakagadziriswa mvumo bug iyo yaidzivirira Python plugins kuisa.
Maaddon ayo achiri kusashanda
Nehurombo, ichi hachisi chinhu chakagadziriswa muKodi 19.4, asi nekuti harisi dambudziko rako. Zviri kune vanogadzira plugin kuti vaite kuti ishande pasina tsvakiridzo yePython 2.x zvakare. Icho chinhu chatakaonawo mune mamwe maGIMP plugins: iwo akagadzirwa zvichibva paPython 2.x uye akamira kushanda. Iri idambudziko reGIMP? Aiwa, idambudziko nevagadziri vasina kukurira software yavo yetekinoroji nyowani. Muchokwadi, paKodi 19.4 pane imwe addon inoshanda zvakakwana, asi vamwe havangoratidze chero chinhu. Zvinonyadzisa, asi ndozvazviri izvozvi. Hatifaniri kuora mwoyo zvakanyanya uye kuva nemoyo murefu, uye kunyange kuvatenda nebasa ravo. Asi muna 19.4 hatigone kunakidzwa nezvisikwa zvake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Kodi 19.4 inouya nezvimwe zvinhu zvitsva, asi hapana gadziriso yeaddon isiri kushanda, chimwe chinhu chevagadziri veaddon kugadzirisa.
Iri ipurojekiti yakafa, chero ivo vasingawedzere Chromecast rutsigiro.
Pindura kuna sinchri
DOOM II: Nyowani nhanho yakaburitswa mukutsigira Ukraine
UCIe, chiyero chakavhurika chechiplets